ပြဿနာအဖြစ်ဆုံး စင်ကာပူသံရုံးအခွန်အကြောင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
သတင်းဓါတ်ပုံ – မိုးသိကြား
Ref: Khin Nyein Chan’s facebook
10 Responses to ပြဿနာအဖြစ်ဆုံး စင်ကာပူသံရုံးအခွန်အကြောင်း
jojo on April 28, 2012 at 10:36 am
ဒီအခွန်ဆောင်မှု့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးအချက်အလက်လေးတွေ ရှိခဲ့ကြရင် အမြဲတမ်းတင်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခဲပါတယ်… နောက်အခွန်ဆောင်မဲ့သူတွေ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အတွက်ပါ… ကျေးဇူးပါနော်
jstsawsaw on April 28, 2012 at 7:49 pm
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျက်သရေအတုံးဆုံးက စင်ကာပူကမြန်မာသံရုံးများဖြစ်မလားမသိပါဖူး။။
ကိုယ့်အတွက်သာကိုယ်ကြည့် ဒေါ်လာမျက်နှာကိုသာကြည့်ပြီး စင်ကာပူရောက်မြန်မာတွေကို
တစ်ခါထဲစာအုပ်ပါတိုးခဲ့ရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟိုမှာအခွန်ဆောင်ပြီး ဒီမှာစာအုပ်ပြန်လာတိုးတာတော့
သဘာဝမကျတဲ့အတွက် သံရုံးကပိုက်ဆံထပ်တောင်းတာမဆန်းပါဖူး။ သံရုံးဆိုတာ တို့လိုအလုပ်သမား
truth on April 29, 2012 at 10:53 am
မြန်မာပြည်မှာ သက်တမ်းတိုးဆိုတော. ကြားဘူးတာက ၁လ အနဲဆုံးကြာတယ်ဆို
စလုံးက လူက ဘယ်လိုလုပ်အဲလောက်ခွင်.ရမလဲ.. ပြောပါဦး
အမြန်လိုချင်ရင် လိုင်းကြေး ၆သိန်းလောက်ပေးရတယ်ကြားတယ်
မြန်မာပြည်မှာ အခွန်ဆောင်တာ သဘာဝမကျဘူးလို.တော. မပြောပါနဲ.
MR. LEE on April 30, 2012 at 9:58 pm
မီးလောင်တိုက်သွင်းဘို့ဘဲရှိတော့တယ်။
Domo Mike on April 28, 2012 at 8:38 pm
i was there on 23.04.12
the stuffs from embassy are changed now. i can say they are changed.
Only the management is lousy and the leader is stupid so the problem was occurred.
actually i was there for 48 hours. received my pp on 25.04.12
uzmo on April 29, 2012 at 10:00 pm
နိုင်ငံအနှံမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာ သံရုံးတိုင်းဟာ သူတို့အတွက်ကိုဘဲကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကျတာပါ ဒါကလည်း လတ်စားတဲ့သူကို အပြစ်မပြောချင်းပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က အကျင့်ပါနေလို့ပါ စေတနာကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပေမယ့် ကြောက်လို့ အမှန်တိုင်းမလုပ်နိူင်တာကလည်း အကျင့်ပါဘဲ အဲဒိတော့ အကျင့်ဖျောက်ဖို့က သူတို့ဘယ်လောက်ရရင်ကျေနပ်တယ်လို့ မေးကြည့်လိုက် ကျေနပ်နပ်မှာမဟုတ်ဘူး ဘာလို့လည်ဆိုတော့ သူတို့က အဆုံးအစမဲ့စားမယ် ၀ါးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဘဲလေ ကိုယ့်အလုပ်တွက် အဆင်ပြေဖို့ကို နည်းလမ်းကျကျဆုံးဖြတ်ပြီး သူတို့ သံရုံးကသူတွေကိုလည် ပြောလိုက်ပါ ငါတို့က နိုင်ငံခြား အလုပ်လာလုပ်တာ မြန်မာပြည်ကို မချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး လုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့ ရမယ့်လစားက မထိုက်တန်လို့ပါ နောက်ပြီး နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာတိုင်း တိုင်းပြည်ကို အထင်မသေးပါဘူး အုပ်ချုပ်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး လူနည်းစုကိုဘဲ အထင်မကြီးတာပါလို့ ပြောလိုက်မယ် အဲဒါက ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေအတွက်တော့ ………………….အဲဒါဘဲနော်
Set Htun on April 30, 2012 at 9:44 am
“မမျှော်လင့်ပဲ မြန်မာ အစိုးရသစ်က ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီကစပြီး အခွန်ပေးစရာ မလိုတော့ကြောင်း ကြေငြာလိုက်ပါတယ်”
That is good news for us, likely burden for tens of year in Singapore, I’ve spent more than 15K S$ since 1997.
“မနှစ်က အခွန် ဟောင်းများကိုတောင်းခံနေခြင်းဟာ ပြဿနာကြီးတခုဖြစ်နေပါတယ်။”
We have to resolve the old tax before 2012, January though Myanmar government that did not follow double taxation agreement previously.
That incidence is technical problem and S’pore embassy is improved rather than last few years.
I just remark that “The world’s is not enough for everyone”.
nandi on April 30, 2012 at 11:12 am
ဒီနေ့ 30 Apr မှာ online booking လုပ်လိုက်တာ application form ရဲ့ညာဖက်ထောင့်မှာ queue နံပါတ်ပါတယ်။ မနက် ၁၀ နာရီ အရောက်လာပြီး check in လုပ်ရမယ်လို့ form ထဲမှာ ပါတယ်။ ချိန်းထားတဲ့နေ့ သွားရင်တော့ သံရုံးမှာ ဘယ်လို ကြုံရမလဲမပြောတတ်ဘူး။ ၂၃ ရက် နေ့က အဆင်မပြေဖြစ်တာ ကို သင်ခန်းစာ ယူပြီး ချက်ချင်းကို web application form ကို update လုပ်လိုက်တာ ဆိုရင်တော့ အလုပ်လုပ်တာ တော်တော် မြန်လာပြီပြောရမယ်။ For others, it would be “an improvement”. But for Myanmar embassy, it is ”amiracle”.
Thu Thu on May 2, 2012 at 2:56 pm
(43 and 1) : A rare comment in Thit Htoo Lwin blog against to 43
To Writer : Ei Ei Khin
ဒါတော့လုံးဝမထောက်ခံဘူး အဲ့ဒီနေ့က ကိုယ်တွေလဲသံရုံးမှာရှိနေပါတယ်
မရေးဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းကြည့်နေတာမရတော့ဘူး …. ကွန်ပျူတာ system ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့် အွန်လိုင်း Q နံပါတ်တွေ မှာပြသနာပေါ်ပြီး လူတွေ တနေ့တည်းထောင်ကျော်သွားတယ် ပြီးတော့ အခုအဖွဲ့ ကအဖွဲ့ အသစ် သင်္ကြန်ပြီးမှစတာ…သူတို့လဲ လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ပြီး အတော်အံ့သြသွားတယ် အများနဲ့ လူနည်းစု ၀န်ထမ်းတွေဆိုတော့ အဆင်မပြေတာတွေပေါ်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် အရင်စစ်အစိုးရခေတ်ကလို လက်လွတ်စပယ် မလုပ်ပါဘူး ၀န်ထမ်းတွေက ၄၈ နာရီသံရုံးမပိတ်ပဲအားလုံးကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်လဲ စာအုပ်ရပါပြီ ….. ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ လဲ သံရုံးဖွင့်ပေးပြီးလက်ကျန်တွေရှင်းပေးမှာပါ … ကျွန်တော်လဲပြည်သူထဲကပြည်သူ တယောက်ပါ သူတို့နေရာမှာကိုယ်ဆိုရင်လဲ ၄၈နာရီ မနားတမ်း အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်ဘယ်လောက်ရှည်နိုင်မှာလဲ…… အရင်တုန်းက သံရုံးနဲ့ အခုသံရုံးဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူး …. အရင်အခြေအနေဆို ကျွန်တော်လဲဒီသံရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုကောင်းကောင်း ဆဲမှာပါ အခုက အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါတယ် … အချိုရည်ဗူး ၁၀၀၀ ကျော်တောင်သံရုံးက ထုတ်တိုက်သေးတယ် အားလုံးကို ဒီလိုကောင်းတာလေးတွေ ထည့်ပြောကြပါဦးဗျာ …. မြန်မာလူမျိုးတွေရယ် … ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ကိုယ်လူမျိုးပဲကိုယ်ဖဲ့နေကြတယ်.. တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးဖတ်ရတာ …. ရေးတဲ့သူရယ် နဲနဲလေးအကောင်မြင်ကြည့်ပါ …. ရုံးကခွင့်ယူရတာခက်တယ်ဘာညာတော့လက်ခံပါတယ် အများနဲ့ဖြစ်တာပဲ နောက်ပြီး သူတို့လဲလုပ်ပေးရှာပါတယ် ဗျာ …… မရေးသင့်ပါဘူး (Dream Creator)
Ye Soe on May 7, 2012 at 10:28 am
I strongly support Thu Thu’s comment as stated above. We can be constructively critical but must recognise and acknowledge the positive response from others. As much as people flocked in front of the Embassy for 48 hours, don’t forget that the Embassy staff were also locked up inside for the same period may be more. They even sent out the refreshments for the crowd. Shouldn’t you at least appreciate such humanitarian gesture? There are always bad and good people- you can attack bad and corrupt bureaucrats but you should have the decency and be civlised enough to acknowledge the existence of good people too.
Why Myanmars want and prefer to attack their own people? They should be ashamed of themselves.